Ụgwọ nke mbak Microsoft Corporation
Ahịa nke Microsoft Corporation taa, ụgwọ nke MSFT ngwaahịa online ugbu a, òkè ahịa nke Microsoft Corporation.
Microsoft Corporation Ahịa ego Ntanetị Online Na-efu akụkọ ihe mere eme Isi mmalite Dividend Uru Ego Ụgwọ
MSFT = 206.26 US dollar
+7.11 USD (+3.45%)
Ọnụahịa ahịa nke Microsoft Corporation na US dollar nwere uru dị ala site na isi mmalite niile. Ọnụahịa ọnụahịa maka ọnụahịa nwere uru dị mkpa kwa ụbọchị. Nke a bụ aka maka ọnụahịa ọnụahịa ngwaahịa. Otu ngwaahịa nke Microsoft Corporation bụ 206.26 ngwaahịa nke US dollar. Otu ngwaahịa nke Microsoft Corporation adịla ọnụ karịa site na 7.11 US dollar. Ọnụego Microsoft Corporation mụbara megide US dollar site na 357 narị narị nke isi ihe.
Microsoft Corporation òkè nke ụlọ ọrụ ahụ bara uru US dollar
Otu izu gara aga, enwere ike rere Microsoft Corporation maka 195.15 US dollar. Otu ọnwa gara aga, enwere ike rere Microsoft Corporation maka 187.20 US dollar. Afọ atọ gara aga, enwere ike ịgbanwere Microsoft Corporation maka 67.26 US dollar. Enwere ike ịhụ ọnụahịa ngwaahịa nke Microsoft Corporation na US dollar na eserese a. 10.18% - mgbanwe na ọnụahịa ngwaahịa nke Microsoft Corporation na US dollar kwa ọnwa. 49.03% kwa afọ - ngbanwe nke ọnụahịa ngwaahịa nke Microsoft Corporation.
Ntụle ahịa Microsoft Corporation US dollar
MSFT Ka US dollar (USD)
1 MSFT 206.26 US dollar
5 MSFT 1 031.30 US dollar
10 MSFT 2 062.60 US dollar
25 MSFT 5 156.50 US dollar
50 MSFT 10 313 US dollar
100 MSFT 20 626 US dollar
250 MSFT 51 565 US dollar
500 MSFT 103 130 US dollar
Ọ bụrụ n ’2 062.60 US dollar, mgbe ahụ na British Virgin Islands enwere ike ịgbanwere ya maka 10 akụ nke Microsoft Corporation. You nwere ike ịgbanwe 5 156.50 US dollar maka 25 ngwaahịa nke Microsoft Corporation. Ihe ntụgharị ngwaahịa ahịa taa na-enye 10 313 US dollar maka 50 ngwaahịa nke Microsoft Corporation. Can nwere ike ree 100 ngwaahịa nke Microsoft Corporation maka 20 626 US dollar. Ihe ntụgharị ngwaahịa ahịa taa na-enye 51 565 US dollar maka 250 ngwaahịa nke Microsoft Corporation. Taa, enwere ike iresị ahịa 103 130 US dollar maka 500 ngwaahịa nke Microsoft Corporation.
MSFT ihe ndekọ akụkọ ego
19/06/2020 195.15 USD -
Taa na 2 July 2020, 1 ngwaahịa nke Microsoft Corporation akwụ 206.26 US dollar. Microsoft Corporation na US dollar na 30 June 2020 dokwara na 199.15 US dollar. Microsoft Corporation na US dollar na 26 June 2020 dokwara na 196.33 US dollar. Oke Microsoft Corporation na US dollar ọnụego maka ọnwa gara aga bụ na 02/07/2020. Opekempe Microsoft Corporation na US dollar ọnụahịa ahịa na nọ na 19/06/2020.
Otu òkè nke Microsoft Corporation taa na-eguzo na 206.26 $. Ọnụ ego MSFT gbanwere na +3.45% ma ọ bụ +7.11 USD kemgbe ụbọchị ahịa ikpeazụ. Ị nwere ike ịzụta 100 mbak Microsoft Corporation maka 20 626 US dollar ma ọ bụ ree 50 mbak nke MSFT maka 10 313 US dollar.
Microsoft Corp bụ ụlọ ọrụ nkà na ụzụ.Ọ na-azụlite, ikikere, ma na-akwado ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ software. A haziri usoro ya n'ime akụkụ atọ: Nrụpụtaghị na usoro azụmahịa, igwe ojii ọgụgụ isi, na More Personal Computing.
Ahịa nke Microsoft Corporation taa, ọnụahịa nke ngwaahịa MSFT bụ online ugbu a.
Intengo MSFT online
Microsoft Corporation oge nchịkọta oge, MSFT ọnụahịa ahịa online, MSFT chaatị.
Microsoft Corporation ihe ndekọ akụkọ ego
Microsoft Corporation Ka US dollar eserese kemgbe mmalite nke ahia.
Microsoft Corporation okpu
Ahịa a na-ere ahịa nke MSFT na-ekere taa na nnukwu akụkọ ihe mere eme nke Microsoft Corporation.
Ego Microsoft Corporation
Oge nke ịkwụ ụgwọ nke dividends na MSFT mbak, dividend yield on MSFT shares in 2020.
Microsoft Corporation nkwụnye ego kwa òkè
Onu ogugu ego nke ulo oru Microsoft Corporation, na-akuko banyere uru nke mburu MSFT maka 2020.
Inye ego Microsoft Corporation
Kwuo akụkọ ego nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Microsoft Corporation, Microsoft Corporation ego maka afọ 2020.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Microsoft Corporation
Microsoft Corporation na ogo ụwa